Black Hole Ọkà Okwu - Imewe Mmewe
Ọkà Okwu Black oghere e mere n’elu ntọala nke teknụzụ nwere ọgụgụ isi ọgbara ọhụrụ, ọ bụkwa ọkà okwu Bluetooth. Enwere ike ijikọ ya na ekwentị ọ bụla nwere nyiwe dị iche iche, ma nwee ọdụ ụgbọ USB maka ijikọ nchekwa na mpụga. Enwere ike iji ọkụ agbakwunyere dị ka oriọna oriọna. Ọzọkwa, ụdị na-adọrọ adọrọ nke Black Hole na-eme ka ọ bụrụ ihe eji amasị ụlọ nwere ike iji ya na imewe.
Aha oru ngo : Black Hole, Aha ndị na-emepụta ya : Arvin Maleki, Aha onye ahịa : Futuredge Design Studio.
Ọkà Okwu Arvin Maleki Black Hole